विशेष गुल्मीमा समानुपातिक तर्फ एमाले अगाडि
Ujyaalo मगलवार, मंसिर २६, २०७४ २३:३२:००
एमालेले क्षेत्र नं. १ मा ३१ हजार ६ सय ३७ मत ल्याएको छ । नेपाली काँग्रेसले २७ हजार २ सय ८८ मत ल्याएको छ । माओवादीले ५ हजार २ सय ४४ मत ल्याएको छ । क्षेत्र नं. १ को चौथो शक्तिमा विवेकशील साझा पार्टी बनेको छ । विवेकशीलले ११ सय ४४ मत ल्याएको छ । ११ सय ४० मत ल्याएर राष्ट्रिय जनमोर्चा पाँचौ स्थानमा आइपुगेको छ ।
दुई निर्वाचन क्षेत्र रहेको गुल्मीमा ४ प्रदेश सभा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष तर्फ सबै सिटमा बामगठबन्धनले जितेको थियो । समानुपालिकमा पनि बाम गठबन्धन नै अग्र स्थानमा रहेको छ । जिल्लाबाट एमाले पहिलो नेपाली काँग्रेस दोस्रो र माओवादी तेस्रो बनेको छ ।
त्यस्तै क्षेत्र नं. २ मा एमालले २८ हजार ४ सय २५ मत ल्याएको छ । प्रतिद्वन्द्वी नेपाली काँग्रेसले १८ हजार २ सय ५६ मत ल्याएको छ । त्यस्तै माओवादीले ४ हजार १ सय ३६ मत ल्याएको छ । चौथो भएको विवोकशील साझाले ८ सय ४४ मत प्राप्त गरेको छ ।
६५ दशमलव ४६ प्रतिशतले मतदान
गुल्मीमा ६५ दशमलव ४६ प्रतिशत खसेको थियो । गुल्मी क्षेत्र नं १ मा १ लाख ९६ हजार ३ सय ३७ कुल मतदाता रहेका छन् । क्षेत्र नं. १ का रहेका कुल मतदाता मध्ये ७० हजार ६सय ५० मत खसेको थियो । क्षेत्र नम्बर २ मा ९० हजार ९ सय १४ जना जम्मा मतदाता छन् । जसमध्ये ५८ हजार ८९ मत खसेको थियो मुख्य निर्वाचन अधिकृत रामप्रसाद न्यौपानेले जानकारीले जानकारी दिनुभयो ।